Shiinaha ayaa sheegay in MA doonistayda Jacaylku laakiin Maldahan 'horumarinta nabad khayraadka'
waqti Post: May-23-2017
Shiinaha wuxuu damcay inuu kala firdhinta walaac ku saabsan hankeeda ku Jacaylku macdanta qaniga on Monday, iyadoo sarkaal leh Beijing ma laha wax qorshe si ay u bilaabaan macdanta ee qaaradda badan. Hawlaha Shiinaha ee ballaarinta gobollada kala horjeeda waa focal point sida Beijing marti shirka sanadlaha ah ee Antarctic T ee ... Read more »
Argentina noqotay sharciga cusub ee macdanta Isbuucaan
waqti Post: May-10-2017
Maamulka Argentine, ciyaartoyda warshadaha iyo ururada ayaa la filayaa inuu saxiixo toddobaadkan heshiis dheer la sugayay federaalka macdanta oo midaynaya sharciga hadda jira guud ahaan dalka, taasoo qayb ka ah dadaal joogto ah in ay ku boodaan-bilaabi maalgashiga ganacsiga. Quruuntii oo, mar uu jecel yahay ka mid ah maal-macdanta, ha ... Read more »
Waa liftoff! Diyaarad Shiinaha-dhisay qaadataa samada
waqti Post: May-05-2017
Diyaaradan rakaabka uu dhibka dheer la sugayay Shiinaha ee C919 qaadaa off on duulimaadyadeeda Maddaarka Caalamiga ah ee Shanghai Pudong on Friday. Qiyaastii 3,000 oo qof goob joog xilligan taariikhiga ah ee ugu horeeyay ee mataanaha-engine, diyaaradda-hal gamcihiisa ee. Mashruuca C919 ayaa la bilaabay 2006. Laba waxaad ... Read more »
SA dib u eegis fal macdanta jiidata 131 gudbiyeen oo ka beeralayda, macdan qodayaasha iyo kooxaha warshadaha
waqti Post: May-02-2017
Dadka dhulka leh iyo shirkadaha sahaminta ka mid yihiin kuwa 131 kooxaha doonaynay inaannu ku hoyanno soo gudbiyeen oo ku dooday in ay dhacdo in ka badan dib u eegista hadda fal macdanta South Australia ee. Afhayeen u hadlay Macdanta iyo Wasiirka Tamarta Tom Koutsantonis yiri "mar gudbiyeen yihiin xididaysan" waxay la lahaa dadweynaha laakiin ... Read more »
sharciga Macdanta: aad u badan, aad u soo daahay
waqti Post: Apr-27-2017
Beddelka muddo dheer la isku haysto sharciga macdanta hadda sii kordheysa noqoto galla in qaladaad ka mid ah nidaamka iyo daqiiqadii ugu danbeysay-daro in iyaga furi doonaa inay caqabad dastuuri ah. Xitaa haddii sharciga Macdanta & Batroolka Resources Development ee (MPRDA) Amendment Bill waxaa soo maray oo ay ... Read more »
Modern Macdanta iyo Technology Week furmay Sudbury
Isla mar marka warshadaha macdanta waxaa lagu isbedel badda ee technology iyo hal-abuurka ah, waxa uu weligii ka muhiimsan si ay u galaan dhalinyarada iyo iyaga baro oo ku saabsan fursadaha lagu heli karaa qaybta. Taasi waxay ahayd farriin la wadaago on April 21 inta lagu jiro qado ganacsiga sanadlaha ah ciyaartoyda Mode ... Read more »
Saraakiisha Booliska Talyaaniga socon garaaca on Great Wall
waqti Post: Apr-25-2017
Siddeed askari oo bilays ah Chinese tegi doonaa on ilaalinta ee Italy horraantii June si ay u caawiyaan dhigooda Talyaaniga ilaaliyo dalxiisayaasha Shiinaha, sarkaal sare oo bilays ah ayaa sheegay in on Monday. Saraakiishii waxay ugu, soo xulay dalka oo dhan u yaqaana Talyaani, gaaf doonaa dhibco dalkinii Rome, Milan, Florence iyo Naples si ... Read more »
nin Gunnedah Guuleystay Macdanta Achiever Award Young NSW
waqti Post: Apr-20-2017
Gunnedah ee Murray O'Keefe waa "Kai" ka dib markii la doortay si ay u helaan Macdanta Achiever Award Young ee NSW. The xildhibaan Gunnedah Shire iyo shaqaalaha Whitehaven Dhuxul lagu dhawaaqay sida guusha ee Macdanta NSW ee Warshadaha iyo Shirkado 'Awards Aqalka Baarlamaanka NSW horaantii bishaan. Mid ka mid ah laba ... Read more »
Australia greenlights Rio Tinto ee sale $ 2.45bn oo ah miinooyinka dhuxusha si Yancoal
waqti Post: Apr-14-2017
Maamulka Australian siiyey Yancoal (ASX: YAL), kabista ah ee Shiinaha ee Yanzhou Dhuxul Macdanta, Iftiin cagaar ah si ay u sii la qorsheeyay in ay afku $ 2.45 billion of Rio Tinto ee (ASX, Lon: RIO) hantida dhuxusha kaamerada in Valley Hunter ah. Guddiga Dib u eegista Arrimaha Dibadda Investment ayaa ansixiyey heshiiska, ... Read more »
Fiore Exploration si loo bilaabo olole qodista ee Chile
Fiore Exploration CEO, Tim Warman, ayaa ku dhawaaqay bilowgii olalaha qoditaanka ee mashruuca ee shirkadda Pampas El Peñón dahab ah ee Chile, kaas oo daboolaya dalka jawi isku mid ah dhulka sida flagship anigaa Yamana ee El Peñón. Warman in MINING.com hadlay bishii lasoo dhaafay ee 2017 Prosp ka ... Read more »